पारसको विराटनगर ‘गर वा मर’ को अवस्थामा ! | Hamro Khelkud
पारसको विराटनगर ‘गर वा मर’ को अवस्थामा !
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – टिभीएस एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) को समहु चरणको अन्तिम खेलमा आज विराटनगर वारीयर्स र काठमाडौं किंग्स इलाभेन खेल्दैछन् । खेल एक बजेबाट टियू क्रिकेट मैदानमा सुरु हुने छ ।
कप्तान पारस खड्का रहेको साविक विजेता टोली विराटनगरलाई प्ले अफमा स्थान बनाउन आजको खेलमा जित नै सहज विकल्प देखिन्छ । आजको नतिजाले ईपीएलमा चितवन टाइगर्सको पनि भविष्य निर्धारण गर्ने छ । विराटनगरले जित निकाल्न सके प्ले अफमा सोझै स्थान बनाउनेछ । सामान्य अन्तरले पराजित भएपनि नेट रनरेटमा चितवनलाई पछि पार्दै विराटनगर प्ले अफमा पुग्न सक्छ । तर फराकिलो अन्तरले पराजित हुन पुगे विराटनगरको यात्रा समुह चरणमै पूर्णविराम लाग्दा नेट रन रेटका आधारमा चितवन प्ले अफमा पुग्ने देखिन्छ ।
काठमाडौंले पहिलो खेलमा चितवनलाई ६ विकेटले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको थियो । दोस्रो खेलमा भने ललितपुरसँग १० विकेटले पराजित हुन पुग्यो । तेस्रो खेलमा पोखरालाई ५ र चौथो खेलमा भैरहवा ग्ल्याडीयटर्सलाई ७ विकेटले पराजित गर्दै एक खेल अगाडीनै प्ले अफमा काठमाडौंले स्थान बनायो । विराटनगरमाथि फराकिलो जित निकाल्न सके काठमाडौं दोस्रो स्थानमा रहेर ललितपुरसँग क्वालिफायर खेल्न पाउने छ । यूएईका कप्तान रोहन मुस्तफा,आयरल्यान्डका अलराउण्डर केभिन ओ ब्राइन, भारतीय प्रदीप साहु, आनन्द र अमित श्रेष्ठ काठमाडौंका मुख्य खेलाडी हुन् । सोमपाल कामी घाईते भएको कारण संभवत आजको खेल पनि खेल्ने छैनन् ।
पहिलो खेलमा ललितपुरलाई ३ विकेटले पराजित गरेको विराटनगरले दोस्रो खेलमा पोखरा राइनोजमाथि सुपर ओभरमा जित निकाल्यो । तर तेस्रो खेलमा भैरहवासँग ४ विकेट र चितवनसँग ५ रनको झिनो अन्तरले पराजित हुन पुग्दा अघिल्लो चरणको यात्रा निकै कठिन बनेको हो । कप्तान पारस खड्का स्वयंले पनि यसपटक ब्याटिङ चल्न नसकेको स्वीकारेका छन् । बाबर हायात,रोलोफ भान डर मर्व, पाउल भान मिकरेन, पारस खड्का, करण के.सी र वसन्त रेग्मी विराटनगरका प्रमुख हतियार हुन् ।
प्ले अफको समिकरण पनि काठमाडौं र विराटनगरको नजिताको पर्खाइमा छ । ललितपुर, काठमाडौं र भैरहवा प्ले अफमा पुगि सक्दा विराटनगर र चितवन मध्य एक टोलीको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । पोखरा जित विहीन हुदैं समुह चरणबाटै बाहिरी सकेको छ ।
ललितपुर ५ खेलमा ४ मा जित र १ मा हारका साथ शिर्ष स्थानमा छ । भैरहवा ५ खेलमा ३ मा जित र २ मा हारका साथ दोस्रो स्थानमा रहँदा काठमाडौं ४ खेलमा १ मा हार र ३ मा जितका साथ तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।
चौथो स्थानमा रहेको विराटनगर ४ खेलमा समान २ मा जित र हार भोग्नु परेको छ । पाँचौ स्थानमा रहेको चितवनले ५ खेलमा ३ मा हार र २ मा जित निकाल्दा जित विहीन पोखरा राइनोज ५ खेलमा खाता सम्म खोल्न नसकेर पुछारमा छ ।